Izitshalo zokudla | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izitshalo zokudla
Indlela yokusebenzisa urea
Bonke ama-agrarians, bobabili abanolwazi kanye novice, bayazi mayelana ne-urea (carbamide). Lokhu kuyimanyolo eguquguqukayo futhi ephumelelayo kakhulu engadini. Namuhla sizokutshela lokho i-carbamide, mayelana nemithetho yokuyisebenzisa njengomanyolo, nendlela yokubhekana nezibulala-zinambuzane ensimini ene-carbamide. Iyini i-carbamide Urea (urea) - i-nitrogen umanyolo emaqeleni, okusetshenziselwa kakhulu ukulima nokulima, ngaphandle kokungabizi futhi okungabizi.
Ukusebenzisa umlotha ngomlotha njengomanyolo
Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu basebenzisa umlotha okhuni njengomanyolo. U-ash akagcini nje ukufaka umquba, kepha futhi ubeka umhlabathi. Ukusetshenziswa komlotha ekulimeni ngesikhathi esisodwa kuthuthukisa kokubili ukubunjwa kwamakhemikhali namakhemikhali enhlabathini. I-Ash inezindawo zokunciphisa i-acidity, isheshe ukuvuthwa komquba bese ukhulula inhlabathi.
Okudingayo ukwazi ngokukhuphula i-castor e-dacha
Isitshalo esihlala njalo sihlumela singamamitha ama-2.5-3 ubude ngamaqabunga amakhulu futhi sikhumbule ngokucacile isundu sesigqila. Uhlobo lwesitshalo aluvamile, oluheha abalimi abaningi futhi lubangele isifiso sokulikhula. Amafutha omculo anezinkathazo zokutshala nokunakekelwa ensimini, okufanelekile ukufunda.
Kuyini usawoti we-potassium
Izingxenye eziyinhloko ezidingekayo kwisitshalo ngasinye yi-potassium, i-nitrogen ne-phosphorus. Bakha izithako eziyinkimbinkimbi ekuthuthukiseni inhlabathi, kodwa ngayinye isetshenziselwa ngokwehlukana ukukhokhela ukuntuleka komunye noma into ethile. Lesi sihloko sitshela konke mayelana nosawoti we-potash - ukuthi yikuphi, yiziphi umanyolo we-potassium, ukubaluleka kwazo kwezitshalo, ukuthi usawoti we-potassium uyagcinwa kanjani, ukuthi usetshenziswa kanjani kwezolimo, yini eyenza i-potassium izitshalo nezimpawu zokuntuleka kwayo.
Umanyolo wokondla izithombo ezivuthiwe - imiyalelo yokusetshenziswa
Ukugqoka phezulu ngamanyolo amaminerali kuyisici esibalulekile sokutshala izitshalo ezahlukene, ngoba ukwethulwa kwezinto eziphilayo kuphela akuhlinzeki zonke izakhi ezidingekayo. Yimiphi imifino edingekayo izithombo? Ukuntuleka kwe-phosphorus ne-potassium, isibonelo, kuzoholela esilinganisweni esincane samashukela ezitshalweni, ngokuntuleka kwe-boron, ukunambitheka kwezithelo noma amajikijolo ngeke kube njengothile futhi okucacile njengoba singathanda, futhi ngaphandle kwe-nitrogen, ukukhula kwezitshalo nezithelo zezithelo kuzosongelwa.
"Shining-2": imiyalelo yokusetshenziswa kwezidakamizwa
Uma ufuna ukuthola isivuno esicebile, akumelwe nje uhlale unakekela izitshalo njalo ubahlinzeke ngezimo ezikhululekile, kodwa futhi uhlanganyele kumanyolo wabo. Ukukhethwa okuhle kakhulu kwabalimi abaningi ngumkhiqizo wezinto eziphilayo "Shining-2", okubandakanya ama-microorganisms ezitshalweni ezikhethiwe ezikhethiwe.
Imvubelo njengomanyolo wezitshalo: kanjani ukwenza imvubelo yokugqoka
Sekuyisikhathi eside kungeyona imfihlo ukuthi imvubelo isetshenziselwa ukupheka nokulungisa utshwala kuphela, kodwa nasemithi kanye ne-cosmetology. Enye indlela yokusebenzisa imvubelo yemifino yemifino, yokudla izitshalo. Cabanga ngalesi sihloko ukuthi kuthinta kanjani izitshalo nokuthi ungondla kanjani izitshalo ngemvubelo.